Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Kanada » Air Canada ayaa ku dhawaaqday doorashada agaasimayaasha
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • News • Dadka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Dhammaan xubnaha la magacaabay waxay mar horeba u shaqeynayeen agaasimayaasha Air Canada mid kasta oo ka mid ah agaasimayaasha waxaa lagu doortay cod aqlabiyad ah oo ay dhiibteen saamileyda ku sugan khadka tooska ah ama wakiil uga ah kulanka.
Shirka Sanadlaha ah ee Air Canada ee Saamilayda ayaa la qabtay Talaadadii, Juun 29, 2021.
Dhammaan xubnaha la magacaabay ee ku taxan wareegtada wakiilkeeda waxaa loo doortay inay noqdaan agaasimayaasha Air Canada.
Natiijooyinka codbixinta kama dambaysta ah ee dhammaan arrimaha loogu codeeyey kulanka waxaa lagu xereyn doonaa SEDAR.
Air Canada waxay ku dhawaaqday maanta in dhammaan magacyada ku taxan wareegtada wakiilkeeda ee ku taariikhaysan May 6, 2021 loo doortay inay noqdaan agaasimayaasha shirkadda Air Canada Shirkeedii Sannadlaha ahaa ee Saamilayda oo la qabtay Talaadadii, Juun 29, 2021.
Dhammaan xubnaha la magacaabay waxay horeyba uga soo shaqeeyeen agaasimayaal Air Canada oo agaasime kasta waxaa lagu doortay aqlabiyad codadkii ay dhiibteen saamileyda ku sugan khadka tooska ah ama wakiil looga wakiishay kulanka. Natiijooyinka codbixinta ayaa lagu faahfaahiyay hoos.
Nominee Codadka % Wixii Codbixintii waa la joojiyey % Waa laga reebay